Dare Rinomisa Chipangano Kuvhiringa Kuvakwa kweGaraji muMbare
Dare repamusoro muHarare rapa mutongo wekuti vechidiki vebato reZanu PF muHarare, avo vanozivikana nezita rekuti Chipangano, havafanirwe kuvhiringidza muzvinabhizimisi, VaAlex Mashamhanda, pakuvaka kwavari kuita garaji ravo kuMbare.
Dare ratiwo mapurisa anofanirwa kuchengetedza muzvinabhizimisi uyu kuitira kuti asanetswe nechikwata che Chipangano.
Mutongi wedare, VaSamuel Kudya, vati mukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuru, vanofanira kuona kuti mapurisa vasavhiringidze basa raVaMashamhanda kuMbare.
VaMashamhanda vakaenda kudare vachida kuti vatungamiriri veChipangano vanoti VaTendai Savanhu, VaJim Kunaka naVaAlfonso Gobvu, vasiyane nenyaya yekurova vashandi vavo pamwe nekuvarambidza kuvaka garaji mumusha weMbare.
Mumagwaro avo ari mudare, VaMashamhanda, vanoti kubva muna Ndira gore rino, nhengo dzeChipangano dzange dziri kurwisana nevashandi vavo pagarji ravari kuvaka kuMbare uye vakatozorambidza vashandi ava kuenderera mberi nekuvaka vachiti VaMashamhanda vaive nhengo yeMDC.
Mune imwewo nyaya, dare ramejasitireti rarerutsa zvarakatarira vaimbove mukuru weZimbabwe Football Association, Muzvare Henirieta Rushwaya, kuti vaite apo vakabhadhariswa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yehuwori mukutengeswa kwemitambo yenyanbu ku Asia.
Gwete raMuzvare Rushwaya, VaJonathan Samkange, vaenda kudare nechikumbiro chekuti Muzvare Rushwaya vapihwe pasipoti yavo sezvo vachida kufamba kuenda kuSouth Africa nekuDubai.
Muchuchisi wenyaya iyi, VaTapiwa Kusema, havana kupikisa izvi izvo zvabva zvaita kuti dare ritambire chikumbiro chaMuzvare Rushwaya. Muzvare Rushwaya vachadzoka zvakare kudare musi wa 9 Kurume.